E jidere na Dubai maka ịnwe otu iko mmanya na Emirates: Ọ bụghị n'ezie?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » E jidere na Dubai maka ịnwe otu iko mmanya na Emirates: Ọ bụghị n'ezie?
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Safety • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
E jidere onye njem Sweden na-efe efe na ọdụ ụgbọ elu Emirates na Dubai na nwa ya nwanyị dị afọ 4 maka ị havingụ otu mmanya?
Ọ ụbigara mmanya ókè mgbe otu iko mmanya na-enye ekele mgbe ọ nọ n'ime ụgbọ elu Emirates? Akụkọ banyere onye njem Sweden na-efe na ọdụ ụgbọ elu Emirates bụ onye jidere na Dubai na nwa ya nwanyị dị afọ 4 maka ị havingụ otu mmanya ahụ n'oge na-adịbeghị anya bipụtara na eturbonews.com.
eTN natara Nkwupụta a site n'aka Attorney General nke Dubai, banyere ikpe a metụtara nke ahụ mere na Dubai International Airport site n'aka onye nnọchi anya PR nke Gọọmenti Dubai:
“Onye ukwu ya bụ Esam Issa Al Humaidan, Attorney General nke Dubai, taa kwenyere na ndị na-ahụ maka ndị isi na Dubai na-emecha nyocha ma mechie ikpe metụtara otu onye Sweden nke gbalịrị ịbanye UAE na paspọtụ nwụrụ anwụ.
“Ihe merenụ malitere mgbe mbata nke onye eboro ebubo ya na nwa ya nwanyị si London Gatwick Airport banye ụgbọ elu Emirates. Ọ nwara iji paspọtụ Sweden abanyela na mba ahụ, nke gaferela na June 10, 2018. Onye ọrụ na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọpụpụ gwara ya na ya enweghị ike iji paspọtụ njem ya banye mba ahụ. Mgbe ahụ, ọ mepụtara paspọtụ ndị Iran, onye ọfịsa gwara ya na ya nwere ike ịbata mba ahụ site na ịwepụta visa ọhụrụ nwa oge, nke kwere ka ọ nọrọ elekere 96, ma gbanwee ụgbọ elu ọpụpụ ya dịka visa ọhụrụ ahụ si dị.
“Nwada Hollman jụrụ iwe n'ihi ụgwọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ usoro a ga-achọ, wee gaa n'ihu kwuo okwu mkparị na onye ọrụ ọpụpụ na-ese foto onye ọrụ ahụ site na ekwentị ya.
“E kpere nkwuputa iwu megide Nwada Holman na ebubo nke okwu rere ure ma na-ese onye ọrụ gọọmentị foto na ịgafe ókèala, mpaghara amachiri. Nwanyị ahụ na nwa ya nọgidere na-arụ ọrụ n'ọfịs nchekwa ọdụ ụgbọ elu ihe na-erughị awa 24 ka enyere ha ọrụ, na-eburu n'uche na ịtụle nwa ya nwanyị dị afọ 4. Nna ya nabatara ya ozugbo ọ bịarutere wee hapụ mba ahụ. Ndị ikpe ahụ kpebiri ịhapụ ebubo Ellie Hollman na ịchụpụ ya kama. ”
Nke a bụ akụkọ dị iche na nke ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi UK na-akọ.